ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော အခြေအနေ တွေ့ရှိချက်များကို လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က နိုင်ငံတော် သမ္မ?? - Yangon Media Group
ဘူးသီး တောင်၊ မောင်တောဒေသရှိ နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်း၏ အခြေအနေ၊ ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်ထားမှုများအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည့်တွေ့ရှိချက်များကို ခရီးစဉ်အပြီး တစ်ပတ်အတွင်း နိုင်ငံ တော်သမ္မတထံ အစီရင်ခံစာတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှသိရသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အ နေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်လေ့လာရေး အစီအစဉ်အဖြစ် ဒီဇင်ဘာ၁ဝရက်က စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၁ရက်တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ တရားရုံးအချုပ်ခန်း၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းနှင့် စစ်တွေထောင်တို့သို့သွား ရောက်လေ့လာခဲ့ကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက်မှ ၁၆ရက်ထိ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသသို့ သွားရောက်ကာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏အခြေအနေ၊ ဘင်္ဂါလီများ၏အခြေအနေနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ရောက် ရှိနေသူများအား ပြန်လည်လက်ခံ ရေးဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေများကို သွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ် ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်က ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်ပြောသည်။
”ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ၊ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ဆောင်ထား တဲ့အခြေအနေတွေကို သွားရောက် လေ့လာဦးမှာပါ။ အဲဒါကိုတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံ တင်ပြသွားမှာပါ။ ပြီးရင်လည်း ပြည်သူတွေသိ အောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေထုတ်ပြန်သွားပါမယ်”ဟု ဦးယုလွင်အောင် က ပြောသည်။ စစ်တွေအကျဉ်းထောင်၊ အချုပ်ခန်းနှင့် စစ်တွေတရားရုံးအချုပ်ခန်းများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ထောင်သားများနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံမှုများပြုလုပ်ရာ အကျဉ်းသားများ၏ တင်ပြချက်များတွင်လည်း ထူးခြားသည့်ဖြစ်စဉ်များ မတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
”ထောင်ထဲမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ပြတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ ထောင်သားနဲ့တူတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတာပေါ့။ အပြင်လူလိုတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ အကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းများသီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းတို့၏နေ ရပ်နှင့်နီးသည့် ထောင်များသို့ပြောင်း ရွှေ့ခွင့်ပေးရန်တင်ပြခြင်းနှင့် အမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ အကျဉ်းကျခံနေရသည်ဟူသောတင်ပြချက်များကိုအများဆုံးတင်ပြကြကြောင်းသိရသည်။ အကျဉ်းထောင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အချုပ်ခန်းများစစ်ဆေးခြင်းတွေ့ ရှိချက်များကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စစ်ဆေးတွေ့ ရှိချက်များကို တရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့လည်းကောင်း အသီးသီးအကြံ ပြုစာပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလောင်းတော် ကဿပ ဘုရားဖူးခရီးစဉ် ယခုလတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း မိုးအနည်းငယ် ရွ?
အရပ်ဘက် အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းပါက အစိုးရအနေဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ကျသွားနိုင်ဟုဆို